General Archives - Ihe Ndị Ruuru Mmadụ & Ihe Osise site na PixelHELPER Foundation
06 nwere ike 2020
กองทุน พิทักษ์ ประชาธิปไตย ไทย เรา - ไทย ระบอบ ไทย ไทย ไทย ไทย
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 6. Mee 2020
คุณ ต้องการ สนับสนุน เรา โดย
Nen วง ร็ อ อ nen Sonnenbichl #RioReiser # รา มา 10 ของ เยอรมนี รถ รอ. กษัตริย์ ก็ เข้า
#PixelHLEPER กำลัง ช่วย ตาม มา มา มา มา มา ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย ขโมย มา มา
ถ้า รา มา 10 จะะ อยู่ ถาวร มา มา มา มา มา มา มา มา และ ประชาชน ก็
50% ของ เครื่อง ดื่ม XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ด้วย ข้ออ้าง ว่า จับ
ฉาย แสง ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
เรา ฉาย แสง การ์ตูน ด้วย ““ คิง ถูก ฟ้าผ่า ตาย ขณะ นั่ง บน 112 ถูก ชีวิต คน คือ 112 ช่วย กฎหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ XNUMX คือ กฎหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ และ คน
ล้อเลียน: “กษัตริย์ กลัว คน ไทย ปลด ปลด เจ้า ถูก” ถูก ต กษัตริย์ ฉาย ถูก. ที่ # เบอร์ลิน เรา ขอ สนับสนุน ให้ ให้ คน
Nen จะ สร้าง อนุสาวรีย์ nen nen nen Sonnenbichl
ระบอบ กษัตริย์ กษัตริย์ ไทย
ฆ่า ตาย ตาย พระราม
ต้อง ลา ออก ประเทศไทย
Mis ฉาย แสง Garmisch Partenkirchen ime obodo
H PixelHELPER เป็น มูลนิธิ ที่ ไม่ ไม่ แสวง
เรา ได้ ปล้น ปล้น ใน ประเทศ ของ เอง
เรา จะ จาก จาก นี้ และ ป ป กับ กับ กับ กับ ป ป ป ะ ชา ชน ของ ตัว เอง ที่ บ้าน เกิด
ฉาย ภาพภาพ ภาพ ภาพ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย เศ เศ เศ เศ เศ เศ
ลง เพื่อ ดู อื่น
กลุ่ม คน คน กลุ่ม กลุ่ม xel xel xel PixelHeLPER ที่ เปิด กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม xel xel xel xel xel PixelHeLPER ที่ เปิด กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม ประเทศ บน การ
กษัตริย์ อายุ 67 ปี ผู้ นี้ ปี 2560 20 100 XNUMX XNUMX ปี XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX แต่ เขา แทบ ปี XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX เน น บิ ช mis Garmisch-Partenkirchen ใน ประเทศ เยอรมนี เยอรมนี ผู้หญิง ผู้หญิง XNUMX คน และ คณะ เมือง คน คน XNUMX กว่า
หลาย คน ทำงาน วา เรียก บัน บัน บัน บัน บัน บัน บัน บัน บัน บัน บัน บัน ทึก ภาพ ไว้ เพราะว่า
ประเทศไทย กษัตริย์ ข้อหา ๆ พวก เขา จะ
ช่วง เวลา น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย ทั้ง สาม คน ถูก ถูก
นับ ตั้งแต่ 2559 9 นัก กิจกรรม เพื่อ ประเทศ ประเทศ ประเทศ XNUMX ประเทศ ประเทศ ได้ ประเทศ XNUMX ประเทศ คน ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ
ประเทศไทย กษัตริย์ อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา อาญา
ได้ รับ ทำ และ เข้า คิด คิด ั น ใน การ ลด ทอน อำนาจ ทาง การเมือง ที่ มา จาก การ เลือกตั้ง ว ชิ รา ลง กร ณ์ มี อำนาจ โดยตรง ใน การ กำกับ ทหาร รักษา พระองค์ มากกว่า 12 นาย ให้ สามารถ ปราบปราม ผู้ ประท้วง ได้
สี่ ครั้ง แล้ว ใน ใน 2516 2519 2535 2553 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ทหาร ได้ ได้ XNUMX มากกว่า XNUMX XNUMX XNUMX และ XNUMX ทหาร ได้ สังหาร สังหาร สังหาร สังหาร สงคราม
นี้ ว ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ไล่ ไส ส่ง 4 2539 2557 เขา หย่า กับ ปี 3 บีบบังคับ ปี ปี ปี ปี ปี XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX บีบบังคับ หญิง XNUMX คน รวม ทั้ง ลุง และ ญาติ อีก หลาย คน ถูก จับ เข้า คุก
ชิ รา ซอน ซอน ซอน ซอน ช ล์ ใน ขณะ
,50,000 ชิ รา กว่า ,29,000 ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX XNUMX ล้าน ยูโร แต่ แต่ เขา ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ,XNUMX ได้ รับ เงิน จำนวน กว่า XNUMX ล้าน บาท จาก งบประมาณ แผ่นดิน ”
ผู้ คน ทั่ว 19 XNUMX XNUMX -XNUMX ใน ขณะ XNUMX XNUMX XNUMX -XNUMX ใน ขณะ XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX -XNUMX ใน ขณะ XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX จำนวน มหาศาล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ั บ ผล กระทบ ไป ด้วย
ไทย ส่วน คุก คุก คุก คุก คุก คุก คุก คุก คุก คุก คุก คุก ใน
ไม่ใช่ แค่ ได้ มนุษย ชน ใน ดิน เยอรมนี ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง ทั้ง อดทน ยอม ให้
Xel คือ เหตุผล ว่า องค์กร PixelHELPER ER การ ทำ แอ นี้ นี้
ต้องการ ให้ เขา หยุด
เรา ต้องการ ให้ ประเทศ ประเทศ
เรา จะ ไม่
Xel คุณ สนับสนุน เรา กับ xel PixelHELPER ได้ ที่ บ บ ด์ https://pixelhelper.org/en/hilfe/
เรา สู้ ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย
กองทุน พิทักษ์ ประชาธิปไตย ไทย เรา - ไทย ระบอบ ไทย ไทย ไทย ไทย June 4th, 2020Oliver Bienkowski
Ndị na - agbachitere ọchịchị onye kwuo uche nke Thai - anyị kagburu alaeze ukwu na Thailand
Nnupụ isi maka ọchịchị onye kwuo uche ya na-apụta na Bundestag, ndị omebe iwu gọọmentị etiti. Anyị na-arịọ ndị gọọmentị German ka ha mee ihe iji chụpụ eze na Germany. Ndi Thai aghaghi inu isi, kwusi ochichi ma mee ntuli aka ochichi onye kwuo uche ya.
Biko jiri adresị inye onyinye anyị: paypal@pixelhelper.tv maka onyinye.
You chọrọ ịkwado anyị na-enweghị aha? Biko jiri obere akpa dijitalụ anyị
PixelHELPER bụ nzukọ na-anaghị akwụ ụgwọ na-eme ihe maka ikpe ziri ezi zuru ụwa ọnụ, ọkachasị na ikike mmadụ, nnwere onwe na ịha nhatanha, yana enyemaka mmadụ.
na-achọ eziokwu. Ọ dịghị ikpe ziri ezi mgbe afọ 10 gachara.
Anyị kpebiri ime ihe iji mee mkpesa megide eze Thai, onye bi na Germany, n'ihi na anyị enweghị ike ikwe ka eze nwere ogologo akụkọ mkparị na-erite uru na nnwere onwe na nnwere onwe na Germany mgbe na-apụnara mba ya ihe.
ụdị bekee dị na vidiyo nke RTL & Bild, anyị na-agbanwe ya n'ime awa 24 na-esote
Anyị ga-aga n’ihu omume anyị n’ụdị dị iche iche, gụnyere arịrịọ maka ndị isi obodo na Bavaria iji kagbuo ikike maka eze ịnọ ebe ahụ. Anyị ga-aga n'ihu ruo mgbe a ga-ezigaghachi ya na Thailand ma chee ndị Thai ihu.
Mkpesa ọkụ anyị na-enyo enyo na Grand Hotel Sonnenbichl bụ mmalite nke mgba anyị ime ka eze zaa ajụjụ ndị nke Thailand. Nkwado anyị chọrọ, biko nye onyinye maka mkpọsa anyị.
Thais na-alụ ọgụ maka ọchịchị onye kwuo uche ya na nnwere onwe ikwu okwu na-akwado otu mba PixelHELPER Foundation ịmalite mkpọsa nke ngagharị iwe megide Eze Vajiralongkorn nke Thailand, onye ọchịchị obi ọjọọ na onye na-eme ihe ike nke na-achị site na egwu na ịmaja site na enyemaka nke ndị ọ na - eso agha.
Eze afọ 67 ahụ ghọrọ eze na 2017 mana ọ na-etinye oge ọ bụla na Thailand. Ruo ọtụtụ afọ, ọ nọwo na-etinye oge ya na Grand Hotel Sonnenbichl na obodo Garmisch-Partenkirchen na German, yana ndị inyom ruru 20 na nnabata nke ihe karịrị ndị ohu na ndị isi 100.
Ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị nọ n'ọchịchị ya na ndị ohu ya bụ ndị mkpọrọ na Germany. Ha achọghị ijere Vajiralongkorn mana ha enweghị nhọrọ. Isi mmalite na-arụ ọrụ maka eze na Bavaria na-ekwu na ndị ọrụ mgbakasị ahụ na-eti ya ihe mgbe niile ka ndị ọkụ ọkụ Vajiralongkorn na-ata ahụhụ dị ka ntaramahụhụ. A na-ese foto ahụ n'ihi na Vajiralongkorn na-enwe ọ watchingụ ikiri vidiyo nke ndị mmadụ na-ata ahụhụ.
Na Thailand, eze ewepụtala ụlọ mkpọrọ na ahụhụ ntaramahụhụ n'otu n'ime obí ya. Enwere ike izipu ndị ọrụ gọọmentị na ndị isi agha ebe ahụ ọtụtụ ọnwa maka obere mmejọ. A na-emekpa ha ahụ, na-eti ya ihe ma na-emegbu ya, na iwu nke Vajiralongkorn.
N’oge na-adịbeghị anya, opekata mpe mmadụ atọ na-arụ ọrụ na eze anwụọla. Obí eze kwuru na mmadụ abụọ n'ime ha gburu onwe ha, nke atọ nwụrụ n'ọrịa ọbara, mana amaara ebe niile na a tara mmadụ atọ ahụ ahụhụ ma gbuo ya.
Kemgbe 2016, e gbuwo mmadụ itoolu Thai na-agbago maka onye kwuo uche ya nke chọrọ ịkwaga ná mba ọzọ. Enwere ọtụtụ ihe akaebe na ndị agha Thai gburu ha na-erube isi n'iwu sitere na Vajiralongkorn.
Eze dị elu karịa iwu na Thailand, nwere ike ime ihe n'enwetaghị ntaramahụhụ. Iwu a nyere ya ikike zuru oke ma onweghị onye nwere ike ịme ebubo ebubo obodo ma ọ bụ mpụ megide ya.
Ndị na-ahụ maka ndị isi ndị agha na-eduga ndị agha Thai na-echebe ya ma na-akwado ya. Dị ka eze, ndị agha Thai bụ ndị iro nke ọchịchị onye kwuo uche ya. N'ime narị afọ gara aga, ndị agha weghaara ike ugboro iri abụọ n'òtù ndị agha, ọ na-abanyekwa n'ọchịchị. Thailand enwebeghị ike ịmalite mmepe ochichi onye kwuo uche ya na-adịgide adịgide, n'ihi na ndị ọchịchị obodo na ndị agha agba izula imebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Vajiralongkorn nwere iwu nke ndị agha karia 12 nke ndị agha Eze Nche na Thailand iji kpochapụ ihe ọ bụla.
Ugboro anọ na akụkọ ihe mere eme nke Thailand - na 1973, 1976, 1992 na 2010 - ndị agha Thai gbuchapụrụ ndị nkịtị na-eme ngagharị n'okporo ámá Bangkok iji chọọ ọchịchị onye kwuo uche ya. Ndị agha egbuola ndị nkịtị Thai karịa ka o gburu ndị agha ala ọzọ n'agha n'ezie.
Vajiralongkorn bụ di na nwunye nke anọ ya ugbu a. Ọ hapụrụ ma wedaa nwunye ya mbụ ala obere oge ha lụrụ, ma gbaa ya alụkwaghịm. Nwunye ya nke abụọ chụpụrụ Thailand na ụmụ nwoke anọ ya na 1996. Ọ gbara nwunye ya nke atọ na 2014, na-amanye ya ka o biri n'ụlọ njide na ịmalite mkpocha obi ọjọọ nke ezinụlọ ya. Ndị mụrụ ya, ụmụnne ya nwoke atọ, nwanne nwanyị, nwanne nna ya na ọtụtụ ndị ikwu ndị ọzọ tụrụ mkpọrọ.
Vajiralongkorn lụrụ nwunye ya dị ugbu a otu afọ gara aga, ma ọ naghị ahụ ya anya, na-ahọrọ ịnọ ọtụtụ oge iji soro harem nọ na Grand Hotel Sonnenbichl, ebe nwunye ya bi n'otu ụlọ nkwari akụ dị n'obodo Engelberg Switzerland.
Vajiralongkorn bụ eze na-achịkwa akụ na ụba n'ụwa, nwee nnukwu akụ nke ihe karịrị ijeri euro iri ise. Mana akụnụba a ezughị ya - kwa afọ ọ na-achọ ego buru ibu site na mmefu ego steeti ahụ, nke ndị ụtụ Thai ga-enweta. N'afọ a, a na-akwụ eze ihe karịrị nde Euro 50 site na mmefu ego Thai.
Ndị nkịtị na-achọsi ike ma agụụ na-agụgbu ka ajọ ọrịa 19 na-efe efe na-efefe Thailand na ụwa niile, ebe eze bi okomoko na Grand Hotel Sonnenbichl, na-emebisị ego buru ibu nke ndị na-atụ ụtụ isi, ma na-emegbu ego ya na ndị ohu ya. Ndị ọrụ e tiri ihe na ndị e metọrọ anaghị anwa ịgakwuru ndị uwe ojii German, n'ihi na ụjọ na-atụ na ezinụlọ ha laghachi na Thailand ga-enweta ntaramahụhụ.
Ọtụtụ thais maara nke ọma na mpụ na obi ọjọọ nke eze ha, mana iwu draconian na-emebi olu ha. Onye ọ bụla nke katọrọ ọchịchị alaeze ahụ na-eche ọtụtụ afọ n'ụlọ nga.
Ọ bụghị naanị Thais na-ata ahụhụ n'ihi King Vajiralongkorn. Ọ bụkwa ibu dịịrị ndị na-atụ ụtụ German, n'ihi na steeti ahụ ga-akwụ ụgwọ maka nchekwa na nchedo maka ya. Ọ na-eme iwu na-emebi iwu dị na ala German - ịzụ ahịa yana na-emegbu ụmụ nwanyị, ma na-emekpọ ndị ohu ya ihe ọ na-emeso dị ka ndị ohu. Ndị German ekwesighi ịnabata ihe a na-eme n'obodo ha.
Nke a bụ ihe mere ndị na-eme ochichi onye kwuo uche Thai ji akwado PixelHELPER ime ihe.
Anyị chọrọ ka ụwa mara gbasara nrụrụ aka na obi ọjọọ nke Vajiralongkorn.
Anyị chọrọ ka ọ kwụsị inye ndị Thai nsogbu.
Anyị chọrọ ka ndị Germany chụọ ya mgbagha maka imebi ọtụtụ iwu.
Anyị chọrọ ka ọ gaa ikpe na Thailand maka mpụ o mere.
Anyị agaghị akwụsị mkpọsa anyị ruo mgbe a ga-ezigaghachi ya ka ọ bịa ikpe ikpe.
Ọ bụrụ na ịkwado anyị, biko kesaa ozi anyị, ma biko nye onyinye na PixelHELPER na weebụsaịtị anyị: https://pixelhelper.org/en/hilfe/
N'akụkụ, anyị nwere ike ịkwụsị ọchịchị ụjọ nke Vajiralongkorn, ma weta ezigbo ọchịchị onye kwuo uche ya na Thailand.
Ìhè na-agagharị na Townhall nke Garmisch Partenkirchen
Ndị na - agbachitere ọchịchị onye kwuo uche nke Thai - anyị kagburu alaeze ukwu na Thailand June 4th, 2020Oliver Bienkowski
Maka ozi ndị ọzọ: https://PixelHELPER.org
24 Dee 2014
333 ụmụ onyinye onyinye
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 24. December 2014
Onyinye onyinye 333 maka ụmụaka
Maka Krismas, anyị kesara akpaaka aka na Marrakech. Omume Krismas a bụ ọdịnala nke nkesa ndị okenye na Christmas nke onye malitere PixelHELPER nke Attac natara onyinye "Malite ngbanwe nke onwe gị."
333 ụmụ onyinye onyinye July 15th, 2016Oliver Bienkowski
3D mmepụta mmepụta aka
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 14. November 2014
Anyị malitere ibipụta Robohand na ntanetị Ultimaker 3D anyị. Ka oge na-aga, anyị nwetara ahụmahụ ma gbanwee mmepụta ahụ na Spain na ụlọ ọrụ ndị na-ebipụta akwụkwọ, nke na-enye anyị aka zuru ezu mgbe anyị gbasịrị ụmụaka na ndị okenye.
3D mmepụta mmepụta aka July 15th, 2016Oliver Bienkowski
24 Ọkt 2014
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 24. October 2014
Nchigharị nke onye na-agbachitere onye na-agbapụ aka na njem gaa ebe ọdachi.
Land Rover Defender remodeling July 15th, 2016Oliver Bienkowski
21 Ọkt 2014
Mgbakọ Summit nke Ahịa ụwa Marrakesh
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 21. October 2014
Nzukọ Maka Ọmụmụ Ihe Nile nke Ụwa Marrakesh 2014. Onye isi nke isi nke Moroccan nwere ike ikpebi ọrụ maka PixelHELPER dịka onye nnọchiteanya ma na-eduzi mkparịta ụka n'azụ ihe ndị metụtara njikọ aka. Ebe ọ bụ na White House bụ onye mmekọ na GES 2014, anyị zutere US Vice President Biden na Mgbakọ ndị nnọchiteanya.
Mgbakọ Summit nke Ahịa ụwa Marrakesh July 15th, 2016Oliver Bienkowski
15 Ọkt 2014
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 15. October 2014
Zọpụta World Congress, Bonn. The Ụlọ ihe nkiri Bonn haziri ihe nka-na nkà mmụta sayensị nzuko na imekọ ihe ọnụ Beethoven Festival, Ofesi Office dị iche iche United Nations na ndị ọzọ na oru Ngo ozu na Bonn. N'okpuru isiokwu bụ "ịzọpụta ụwa - A utopian njem na ọkachamara, nka na ndị ọkà mmụta sayensị" ga-e si na ogbako emmepe, ụlọ mgbakọ na laboratories na mere a sensory ahụmahụ na ogbo maka a wider ọha zuru ụwa ọnụ na nsogbu nke ndi mmadu na-ha ebube. Pixel Inyeaka nwere ya ozi guzo na ntụpọ na nwere na-ege ntị na-enye a mbụ echiche nke pikselụ Inyeaka oru ngo.
Zọpụta Ụwa July 15th, 2016Oliver Bienkowski
07 Ọkt 2014
PixelHELPER Cubik na UN
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 7. October 2014
Cubik na United Nations. The Magic Cube, nke PixelHELPER zutere na njem 40 gburugburu ụwa, Nuseir Yassin gosipụtara ya na United Nations wee zigara Morocco.
PixelHELPER Cubik na UN July 15th, 2016Oliver Bienkowski
Nkesa nke ụlọ akwụkwọ
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 10. September 2014
Ịlaghachi n'ụlọ akwụkwọ na Morocco. Ekepụta Ụlọ Akwụkwọ na-anọchi anya Ụlọ Akwụkwọ - Ntanye eserese nke PixelHELPER si na Mmiri Featured na Marrakech na-ezute kpọmkwem na ụmụaka site na obodo anyị na-eje ozi na nso Marrakech. Anyị kwadebere ọtụtụ ihe maka mmalite ụlọ akwụkwọ.
Nkesa nke ụlọ akwụkwọ July 15th, 2016Oliver Bienkowski
Mmekọrịta Creative nke Morocco
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 30. August 2014
Maroc Social Creative Start Cup, 2. Ebe. N'ezie, Morocco anaghị eziga otu ndị Germany na Copenhagen maka njedebe zuru ụwa ọnụ nke "Creative Business Cup". Ọ bụ ya mere anyị ji kwado 2. Ndị mmadụ jupụtara na ntụrụndụ anyị na-eche echiche banyere ìgwè mmadụ.
Mmekọrịta Creative nke Morocco July 15th, 2016Oliver Bienkowski
Nkesa nke egwuregwu na akwụkwọ mmega
Nkesa ihe eji egwuri egwu na akwụkwọ mmega n'Ugwu Atlas dị nso na Marrakech. Mụ na Abury Foundation na-arụ ọrụ n'ebe ahụ, anyị na-ekesa ihe ụmụaka ji egwuri egwu ma wepụ ihe mkpofu n'ebe ahụ.
Nkesa nke egwuregwu na akwụkwọ mmega July 15th, 2016Oliver Bienkowski
Enyemaka maka Marrakech
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 17. August 2014
Nkesa onyinye ndi ozo n'ugwu nke Marrakech. Anyị na-ebugharị ụgbọ ala anyị mgbe nile ma na-ekesa ihe enyemaka dị iche iche n'obodo nta ndị dị na Marrakech.
Enyemaka maka Marrakech July 15th, 2016Oliver Bienkowski
PixelHELPER Games com
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 13. August 2014
Gamescom 2014 - Ogige PixelHELPER anyị
PixelHELPER Games com July 15th, 2016Oliver Bienkowski
Egwuregwu egwu egwu na Palmeraie Marrakech
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 12. August 2014
Agbapụ egwuregwu Gamescom na Palmeraie na Marrakech. Mụ na ọkachamara a ma ama Youness Mouthadi wepụtara Trailor maka azụmahịa mbụ anyị. Iji gosipụta echiche futuristic nke PixelHELPER, anyị na-emegharị nsonaazụ site na fim Stargate.
Egwuregwu egwu egwu na Palmeraie Marrakech July 15th, 2016Oliver Bienkowski
Nnwale ule vidiyo
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 11. August 2014
Nnwale ule vidio na obodo ndi ogbenye na Ustream.
Anyị ghọtara ngwa ngwa na na okpomọkụ n'elu 40 degrees, ihe ngwaike dị mkpa ka mma. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ebe ịnweta WLAN mobile na batrị nwere ike ịwụnye.
Nnwale ule vidiyo July 15th, 2016Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 8. August 2014
Ikike maka nkesa ihe inyeaka na Morocco ruo n'afọ 3013. N'ezie, ọ bụ naanị typo, ma ọ dịkarịa ala anyị ekwesịghị ịjụ ọnwa ole na ole ugbu a.
Nkwenye nkesa July 15th, 2016Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 18. July 2014
Mkparịta ụka banyere ọrụ PixelHELPER anyị na #Marrakech. Onye otu dr. Mohamed Kalakhi si na Embassy nke Alaeze nke #Marocco na #Berlin
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 6. July 2014
Mbido mbụ na slrakech nke Marrakech. Anyị na-etinye aka dị mkpa maka imeziwanye ọnọdụ anyị n'oge. Ya mere, anyị malitere na mgbanwe nke palmentore na ọnụ ụzọ ámá ọla ma nweta ụgbụ maka ndị na-eto eto egwuregwu.
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 2. July 2014
Malite nke oru ngo; Nlekere mbụ nke nkà na ụzụ. Na mbụ, anyị ga-ekwu na ọsọ ọsọ Internet dị njọ n'oge mbụ. Anyị aghaghị ịgbanwe ọtụtụ ihe na ndokwa na Africa. Na njedebe ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma anyị nwere ike ịmebata atụmatụ niile anyị zubere.
Gaa na Marrakech na ìgwè PixelHELPER. N'ọgwụgwụ nke ụgbọ elu ahụ, anyị nwere ike ịde foto n'ọdụ ụgbọ mmiri tupu anyị aga Medina nke Marrakech ma na-eche ihu na ọdịiche dị iche iche na Europe.
30 nwere ike 2014
01. Mee - 30. Mee 2014
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 30. Mee 2014
Nhazi nke ngwongwo AlphaTest maka Afrika na Düsseldorf; Iji kọmputa rassel Pi na obere igwefoto na akwa azụ azụ na batrị batrị.
01. Mee - 30. Mee 2014 October 7th, 2015Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 30. April 2014
Mgbanwe nke drones ụgbọ elu, ụgbọ mmiri drones na drones na ebe nrụọrụ weebụ Ịntanetị maka enyemaka mbụ na-aga ebe ọdachi. A na-enyocha ule arụmọrụ mgbe ịmalitere nzọụkwụ Livestream crowdfunding.
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 18. April 2013
Alpha ule nke nnyefe drones na Dusseldorf ngosi Center maka Dokumi. Anyị nware akpafe akpa AVATAR na igwefoto sticki na ohere zuru ezu maka akụ akụ ike maka ndụ na-aga n'ihu na Kriesengebieten. Nke a na-eji mmiri eletrik, ga-eji n'ọdịnihu dị na Kriesgebieten site na avatars PixelHELPER iji nyere ndị ahụ emetụtara aka site na ekwenti na Intanet na-ekwurịta okwu na ụwa.
19 Dee 2012
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 19. December 2012
Onye na-ese ihe nkiri na onye nchoputa nke PixelHELPER Oliver Bienkowski jikọtara ebe obibi laser na Skyspace James Turrell na Light Art Center Unna. O jikọtara ụlọ elu ahụ na ụlọ elu ụlọ ụka dị nso. A na-ese foto ụfọdụ site na drone. Ndị a drones na-enye ezigbo ntụziaka dịka igwefoto telivishọn nke na-enye ohere ịntanetị nye ndị emetụtara. Igwe ntanetị nke dị na mbara igwe dị ka onye ọhụụ FPV nwere ike iji ndị ọrụ nzuzo na ndị enyemaka dị nta na ndị mmadụ nọ n'ógbè dịpụrụ adịpụ nke ọdachi ndị na-emere onwe ha nwere ike ịkpata. Karịsịa n'ihe banyere ọdachi, ọ bụ ihe kachasị mkpa maka nsogbu ahụ na ịdabere na nkwalite nkwurịta okwu. Ole na ole n'ime ndị mba mepere emepe nwere ike iche taa n'ejighị ọkụ eletrik na Intanet.
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 9. April 2012
Anyị nwalee FPV (First Onye View) nnyefe nke video n'ókè na a ụgbọ mmiri. Na ike mpi nwere ike ịbụ ka a video mgbaàmà ka sikwuo gị ike ife ụgbọelu drone ofụri Luxembourg, dị ka ama owụt Raphael Pirker nke Team Black Atụrụ. Anyị chọrọ iji na-eme n'ọdịnihu iga, internet na mbụ enyemaka drones n'ụwa nile, bukwa ndi pixel Inyeaka ego Live Stream crowdfunding n'elu ikpo okwu.
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 1. April 2012
Ụgbọ ala drone na-emegharị ya na ọdụ ụgbọ oloko NATO na Neuss (Hombroich). Na miniature drone e ka na-ebufe drones.
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 7. March 2012
Site na FPV n'ụdị nku, nnukwu oge ụgbọ elu nwere ike nweta na nsonye igwe. N'ọdachi, ndị mmadụ nwere ike iru 30-70 kilomita na-agafe, dabere na ike transmit nke redio, na-eji nọn nku ndị a ma nye ha Internet ruo mgbe a weghachitere ya.
07. March 2012 October 7th, 2015Oliver Bienkowski
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 29. November 2011
Ntọala nke Echiche nke pixelHEPER eV na Neuss, Germany. Dabere na ntọala a, anyị kpebiri ịmalite na PixelHELPER. N'oge ahụ, anyị chọrọ iwepụta Slumdog Tycoon, ihe egwuregwu nke ọzọ nke gbanwere n'ime ikpo okwu ndị na-eme mkpọtụ na-eme njem mgbe mbụ na-eche echiche tankị na nnọkọ echiche.